राष्ट्रिय झन्डा जलाएको भिडियो बनाएका गायक जेल चलान, बाँकीलाई धरौटीमा रिहा ! « MNTVONLINE.COM
राष्ट्रिय झन्डा जलाएको भिडियो बनाएका गायक जेल चलान, बाँकीलाई धरौटीमा रिहा !
काठमाडौँ । म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको दृश्य राखेको आरोपमा पक्राउ परेका ९ जनामध्ये गायक पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने बाँकाी ८ जना रिहा भएका छन् । आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका नौ जनामध्ये मुख्य आरोपी गेल्जङ दोर्जे तामाङलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
पक्राउ परेका ८ जनामध्य तीन जना १५–१५ हजार धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् भने अन्य साधारण तारेखमा छुटेका हुन् । भदौ १ गते एक युट्युव च्यानलमार्फत् ुदेशद्रोहीु नामको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो । त्यस भिडिओको ४० औं सेकेन्डमा गायक तामाङले झण्डा जलाएको भिडिओ थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले यसमा संलग्न गायक तामाङसहित नौ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
उक्त म्युजिक भिडिओ मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–३ स्थित सल्लेनीको विष्णु आधारभूत विद्यालयमा खिचिएको थियो । राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गरेमा कानुन अनुसार ३ वर्ष कैद सजाय, ३० हजार जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ । अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम फैसला भने गर्न बाँकी छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले राष्ट्रिय झण्डा जलाउन नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको झण्डा जलाइएको आपत्तिजनक भिडियो युट्युवमा, के छ कानुनी व्यवस्था ?